काम गर्ने उपभोक्ता पाउनै गाह्रो ! Nepalpatra काम गर्ने उपभोक्ता पाउनै गाह्रो !
काम गर्ने उपभोक्ता पाउनै गाह्रो !
बलेवा । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ स्थित रेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुकुरकाटे बगर दशमुरे स्थानीय सडक निर्माण भयो । वडा कार्यालयको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा साढे रु तीन लाखभन्दा धेरै खर्च आयो ।
#उपभोक्ता पाउनै गाह्रो